Kaalmooyinka maxay u yihiinEhDhirka?
Shabakadda dhirka guriga waxaa lagu sheegaa in shabakadda dhismaha meel kasta oo dhan. Ma aynu u muujinno manfadeeda iyo sababta aynu aqoono. Markii shabakadda ee dhismooyinka uu u baahan yahay, waxay leedahaysaa shabakadda kale. Sidoo kale waxaa ku badbaadiyaa waxyaabaha ugu qiyaato 30 %. Sida uu uu uu muhiimsan uu muhiimsan.
Sidoo kale, shabakadda dhismooyinka uu wanaagsan kartaa, shabakadda guriga waxaa lagu daalin karaa. Markii u baaxayso salka, waxaa lagu qorsheysan karaa oo lagu sameyn karaa tusaale ahaan fiiriyada qorsheynta. Sidoo kale isbarbarid ee guudka ah, waxay heli kartaa xillid wanaagsan, si uu u sii u dhaqsan karaan xilliga dhismaha iyo waqtiga u gaabinayo.
Sidoo kale shabakada guriga ee uu uu uu baahantahay waxay kaalmeeysaa sharciga iyo qasabka shaqada. Waxay u sameyn kartaa guridda uu uu sameysaa qasabka badbaadada, kuwaas oo uu uu uu uu uu uu uu uu uu sameyn karaa si fiican uu u socdaa. Qaddankan waxaa sidoo kale la sii sheegay shaqada dhismo. Shaqooyinka shaqaalaha shaqaalaha ee waxyaabaha shaqaalaha ee waxbarashada ku saabsan xirfadeeda, oo si uu u socsi karaa in shabakadda guriga uu lahaa xoog badan toos ah.
Isku isticmaalka shabakada dhismooyinka waxaa la wadhin karaa wakhtiga ee goobaha salka ee dabka ah ee baahan. Laakiin waxaa ku yaal lacagta caawimaad, laakiin uu iska si wanaagsan. Markii kuu uu uu fudud u ciyaareyso, waxey u caddeyn yihiin lacagta, kuwaasoo ka dhigaa qiimaha xoogsashada. Kaalmada shabakadda dhismooyinka waa weyn yahay, isticmaalka tusaale ahaan, saameynku waa sare.
Horey:Sidee uu isticmaalaa xarfaha hifaha?
Ka dambe :Sidee uu kala tago xilliga ee shirkadda ee hiwaayada?
Sidee uu kala tago xilliga ee shirkadda ee hiwaayada?
SideedEh?Shambarka guryaha ee dhis ah sidii uu u yahay manfado badan oo kale ee dhismooyinka. Waxaannu ku heshiisannayaa in xoogga uu uu uu xoogsan tahay, iyo goobta kulaylka, Biyo la’aanta ee lacagta...
Sidee uu isticmaalaa xarfaha hifaha?
Maxay u isticmaalayEh?Sidoo kale, qof walba waxaa ku yaala duwan kala duduwan ee dhisaasha la xiriira, waxaa laga sameyn karaa dabadeed kadib. Sidoo darteedka shabakadda dhismaha aad u xoog badan yaha...